के अब आउने कोभिड-१९ को लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन्? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के अब आउने कोभिड-१९ को लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन्?
स्वास्थ्यखबर मंगलबार, साउन १२, २०७८, १४:४५:३६
प्रश्न: के अब आउने कोभिड-१९ को लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन्?
उत्तर- हालसम्म भएका अध्ययनहरुले कोभिड-१९ को खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने जोखिम निकै कम हुन्छ भन्ने कुरा देखाएका छन्।
कतिपय विकसित मुलुकमा बालबालिका मात्र खोप लगाउन बाँकी भएकाले उनीहरु बढी प्रभावित हुन सक्ने भनिएको छ तर नेपालमा अहिलेसम्म पनि अधिकांशले खोप नपाएकाले गम्भीर संक्रमण हुने जोखिम बालबालिकासहित खोप नलगाएका सबै व्यक्तिहरुलाई उत्तिकै छ।
त्यसैले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी सबै उमेर समूहकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुको पालना गर्न छाड्नु हुँदैन।
के बालबालिकामा जन्मजात थाइराइड समस्या हुन्छ? के-के परीक्षण गर्ने? बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासमा यो ग्रन्थीबाट निस्कने हर्मोनको प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा यो समस्याको निदान र उपचारबारे ज्ञान हुनु अत्यन्त जरूरी छ। आइतबार, जेठ १, २०७९
गर्मीमा बालबालिकालाई किन आउँछन् घमौरा र कसरी जोगिने? कान्ति बाल अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ हरेक दिन कयौं बिरामीहरु घमौरा, घाउ, खटिरा र कीराको टोकाइबाट आउने एलर्जीको समस्या लिएर आउने आइरहेका हुन्छन्। गर्मी मौसममा अन्य समयभन्दा तुलनात्मक रुपमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट हुने छालाका समस्या बढी देखिन्छन्। बिहीबार, वैशाख २९, २०७९
किन गर्छन् बालबालिकाले ओछ्यानमै पिसाब? उपचार के होला? सुतेका बेला ओछ्यानमै पिसाब गर्ने समस्या आम बालबालिकामा हुन्छ। अधिकांश बालबालिकामा भने यो समस्या हुर्कंदै गएपछि आफैँ ठीक हुन्छ। यो बालबालिकाको मिर्गाैला रोग, अल्छिपना वा चकचकेपनाका कारण भएको होइन। बुधबार, चैत ९, २०७८
ट्राफिक प्रहरीद्वारा डा घिसिङलाई कुटपिट गरिएको घटनाप्रति चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण ४ घण्टा पहिले